Dallada Koonfur Galbeed ee Sweden oo tacsi u dirayso reer Sheekh Maxamed Hargeysa
arlaadi February 28, 2016 1 Comment
Dhammaan gudiga dhexe ee Dalladda KGS Sweden iyo dhamaan jaaliyaddaha KSG ee Sweden, waxa ay tacsi u dirayaan Jamiila Sheikh Mohamed Hargeisa oo ah Gudoomiye Kuxigeenka Dalldda Koonfur Galbeed ee Sweden, oo walaalkeeda Nuuni Sheikh Mohamed Hargeisa, maanta 28 February 2016, ku geeriyooday qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaaalada Baydhabo ee Golbolka Baay. Inaa Lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun.
Tacsida waxaa kaloo loo dirayaa dhammaan reer Sheikh Mohamed Hargisa oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibediisa. Marxuumka Waxaa Alla looga baryayaa inuu Jannadii Fardowsa Alla ku abaalmariyo, eheladii iyo qaraabadii uu ka baxayna samir iyo iimaan Alah ka siiyo.
Sidoo kale waxa ay Dallada KGS ee Sweden tacsi midaas la mid ah u diraysaa dhamaan qoysaskii, eheladii iyo guud ahaan ummada Muslimiinta ee ay ehelkoodu ka mid noqdeen dadkii maanta ku dhintay qaraxyadii kala duwanaa ee ka dhacay magaalada Baydhaba.
Abdulkadir Abukar Shiekh
Dalladda KGS ee Sweden
Sydvastsomalisak Riksförbudet i Sverige (SRS)
Innaa lilaahi wa inaa ileyhi rajucuun, Allah haka warabiyo janatul fardawsa Adeerkey shekh mad hergeesi, Ameeeeen yaa rabi, anagana samir imaan Allah hanaga siyo, ameen amn amn,